No tena mila ny herin ny mpisolovava ho an'ny fiara ankehitriny - Mpisolovava Korea an-tserasera. Koreana Mpisolovava, ny lehibe indrindra ara-dalàna ny vavahadin-tserasera.
No tena mila ny herin ny mpisolovava ho an'ny fiara ankehitriny
Ny fisoratana anarana ampy ny madio kahie na hafa-taratasy
Ny tanora ny mpamily dia matetika liana na ny herin ny mpisolovava ny fiara dia ilaina ankehitriny, satria matetika ianao te-hitondra ny fiara, ary misy foana dia tsy ampy ny fotoana, na ny faniriana vola taratasy fahazoan-dalanaKoa, tsy te-hiatrika ny mpiasa ny lalana maso, satria ny sazy tsy maintsy ho tena avo. Dia hasehoko anao izay toe-javatra ity tahirin-kevitra ity dia takiana, sy izay azonao atao raha tsy misy izany. Ankoatra izany, tsy misy sazy ara-bola dia matetika no karama noho ny tsy fisiany. Maro ny mpamily mandra- efa nahavita familiarize themselves with ny miankina amin'ny fanjakana didim-panjakana ny taona No, izay mifehy ity olana ity. Ny lalàna dia miharihary ny manafoana ny teo anatrehan 'ny herin' ny mpisolovava rehefa fandefasana ny antontan-taratasy ny fifamoivoizana polisy. Na ny takelaka misy sora-tanana dikan-tsy ny antontan-taratasy fanamarinana ara-panjakana amin'ny alalan'ny notary vahoaka mpanara-maso dia manana zo hitaky ny mpamily.
Ny fiara tompony ara-dalàna dia afaka hamindra ny fiarany ary ny marina mba hitondra ny hafa tsotra tsy misy soratra avy ny herin ny mpisolovava. Ny mpividy mandoa ny nanaiky vola, mahazo ny fiara sy ny mandika ny fifanarahana momba ny fivarotana. Ny fifanarahana dia ny daty famaranana Folo andro avy izany daty izany dia nomena ho re-registration ny fiara sy ny fisoratana anarana ny CTP.
Rehefa ny mpitandro ny fifamoivoizana mpanara-maso mijanona toy izany milina izany folo andro ny fotoana elanelam-potoana io, dia ampy ny fanomezana ny zon'ny, ny JTS sy fifanarahana io. Tsy misy fanampiny herin ny mpampanoa lalàna dia takiana Rehefa namantatra ny laharan-na ny herin ny vava no ilaina fa ny milina, misy toe-javatra izay dia tsy azo atao raha tsy misy toy izany ny tahirin-kevitra.
Matetika izany no ilaina mandritra ny fampiasana ny fiara, toy ny tetezana mitsingevana fananana. Ny lalàna mamela ny andalan-tsoratra ny MOT, fisoratana anarana amin'ny faran'ny ny karatra fizaham-pahasalamana ary tsy maintsy atao fiantohana raha tsy misy ny fandraisana anjara ny tompon'ilay fiara. Na izany aza, ny mpanoratra herin ny mpampanoa lalàna dia tsy maintsy, izay tsy tokony ho navoakan'ny notary. Ny hery mitovy ny mpampanoa lalàna mety ho ampiasaina rehefa izany dia ilaina ny maka ny fiara rehefa avy nentina ho babo araka ny fahamaiton'ny taretra rongony kamiao. Ny mpitantana ny sazy faritra manan-jo hamoaka ny fiara tsy manolotra izany tànana ny tahirin-kevitra, izy ireo dia tsy ho afaka nanao izay tiany ny fananana raha tsy misy ny fahazoan-dalana ny tompon'ny fiara. Araka ny lalàna, ny fahefana ny mpampanoa lalàna dia ny delegasiona ny fahefana an-tsoratra avy amin'ny olon-tsotra iray hafa noho ny fankatoavana ny antoko fahatelo. Ny fepetra takiana ho toy ny tahirin-kevitra dia ny fanaovan-tsonia ny transferor, ny daty fisoratana anarana ny antontan-taratasy sy ny teny. Amin'ny alalan'ny toerana misy anao, dia fomba nentim-paharazana mba hamaritra ny fe-potoana ataon 'ny herin' ny mpisolovava iray taona, raha tsy voalaza ao anatin izany. Ny tompony dia manana zo hamaritra ny fotoana ela Ny ambony indrindra ho izay ny herin ny mpampanoa lalàna dia mety ho voasarika ny telo taona. Aorian'ny fe-potoana io, ny tahirin-kevitra dia lasa tsy manan-kery. Tsy misy endrika manokana na ny endrika ho toy izany tahirin-kevitra. Dia ilaina ihany ny marina tsara mampiseho ny tahirin-kevitra ny mandray anjara ny olona. Eo amin'ny website, ianao dia afaka misintona ny endrika endrika, izay tsy mila fotsiny mba fenoy ny ilaina ny andry. Mamintina, dia manamarika fa rehefa mitondra fiara vahiny fiara, ny mpamily dia tsy maintsy manana fahefana ny mpampanoa lalàna. Ity tahirin-kevitra ity dia ho ilaina ihany rehefa manazava ny fiara, toy ny fananana. Rehefa mameno izany dia ilaina ny hiditra ny lany daty, ataovy ny amin'izao fotoana izao ny daty sy ny fanaovan-tsonia ny tompon'ilay fiara.
Didim - Fanakanana ny Fananana ny Governemanta ao Korea Avaratra sy ny Antokon'ny Mpiasa ao Korea, ary ny Fandraràna Sasantsasany Varotra amin'ny Fanajana Korea Avaratra
Writ of Гүйцэтгэл Техасын: Маш хүчтэй цуглуулах арга хэрэгсэл